Shiilki diyaaradeed ee dhacay iyo aqoonta duuliyeyaasha maxaa xiriir oo ka dhaxeeya? - BBC News Somali
Image caption Diyaarad Boeing 737 MAX 8 oo ay leedahay shirkadda diyaaradaha Itoobiya
Warbaahinta baahisay warkanna waxay sheegeen "iney xogta ka heleen ilo aad ugu dhow shirkadda diyaaradaha Itoobiya balse ay magacooda shaacin".
"waxayna sheegeen duuliyaha diyaaradda waday iney u harsaneyd tababarka duulimaadka koombiyuutarka (simulator) lagu qaato si diyaarad cusub markay timaaddo uu duuliyaha ula sii qabsado uusan qaadan.
Duuliyahana waxaa uu u ballansanaa ayay yidhahdeen inuu bishan dhammaadkeeda uu tababarka qaato balse uu tababarka ka horba shilka diyaaradda uu ku geeriyooday ".
Shirkadda diyaaradaha Itoobiyana waxay sheegtay "warkaasi inuu yahay mid been ah oo looga tala galaay in eedda ay lahayd shirkadda Boeing dusha laga saaro shirkadda diyaaradaha Itoobiya".
Image caption Maareeyaha guud ee shirlkadda diyaaradah Itoobiya oo ku sugan goobta ay diyaaradda ku burburtay
"Duuliyeyaasha shirkadaha waaweyn ee Mareykanka markay duuliya ka noqonayaan diyaaradda Boeing 737 Max 8 waxay tababar hal saac ay ku qaataan Ipad, marka iney caddahay iney ujeddadu tahay khaladka Boeing in dusha laga saaro shirkadda diyaaradaha Itoobiya" ayey tiri shirkadda diyaaradaha Itoobiya.